Previous Article Ụlọ Omebe Iwu Anambra Ebinye Aka n'Amụmà Ego Ọrụ Nke Ahọ 2020
Next Article Ọkọchị: Obianọ Adụọla Ndị Ji Ọrụ Okpuru Ụzọ Ka Ha Chighaa n'Ọrụ
Aka na-achị steeti Anambra bụ Gọvanọ Willie Obianọ akpọkuola ma dụọ ndị nne ka sonyesie ike ma tụnye ụtụ nke ha n'agha ahụ a na-ebu megide otu nzuzo, ịkpọ/ịñụ maọbụ ịtụ mgbere ọgwụ ike, ya na ihe ndị ọzọ na-ewèta ala adịghị mma n'obodo.
Gọvanọ Obianọ kpọrọ oku a n'okwu ya na mmemme inye ọzụzụ, bụ nke a chịkọbààra ndị ndu ụmụnwaanyị obodo dị iche iche na steeti ahụ, ma bụrụkwa nke weere ọnọdụ n'ogige 'Dọra Akụnyịli Women Development Centre', dị n'Awka bụ isi obodo steeti ahụ.
Ọ kọwàrà ụmụnwaanyị dịka ndị nwere nnukwu ọrụ pụrụ ìhè n'ịkwàlite mmepe obodo na steeti, ma dụọ ha ka ha were óké ọrụ ahụ dịịrị ha wee kpọrọ ihe ma na-arụsikwa ya ike oge niile, ọkachasị n'ebe o metụtara inye ụmụ ha ọzụzụ, karịa ịgbahàpụrụ ya ndị nkuzi maọbụ ndị òdìbọ, n'ihi na ọ bụ site n'ụzọ dị otu ahụ ka ụmụaka na-esi akpafù ma na-amụtakwa ihe ọjọọ dị iche iche.
Ọ nọkwazịrị na ya bụ mmemme wee kwuwaa na gọọmenti steeti ahụ gà-enye ndị ntorobịa dị puku abụọ n'ọnụ ọgụgụ ọzụzụ n'ọrụ aka dị iche iche n'isi ngwụcha ahọ a, nke mgbe e mechàra ya, e nye ha ego iji wee màlite ihe ha mụtàrà, ọbụnadị dịka o mere ka a mara na agba nke atọ nke atụmatụ 'Community Choose Your Project' ga-amàlite n'ọnwa Jenụwarị ahọ na-abịa abịa, bụ atụmatụ ọ na-esi na ya wee nye obodo dị iche iche ego iji họrọ ma rụọ ihe na-akpa ha.
N'okwu nke ya, Kọmishọna na-ahụ maka nkwalite na ihe metụtara ọdịmma ndị nne na ụmụaka na steeti ahụ, bụ Nwaada Ndịdị Mezue kwuru na ọchịchị nọ ugbua na steeti ahụ akwàlitela mmepe ime-ime obodo na ọchịchị obodo n'ụzọ pụrụ iche, ma tokwazie Gọvanọ Obianọ na nwunyè ya maka ezi ọrụ ha dị iche iche.
O kọwara na obodo niile dị na steeti Anambra nakwa ngalaba niile nke steeti ahụ enwetela mmetụta nke ezi ọchịchị Gọvanọ Obianọ, ma sịkwa na mmadụ ruru puku iri ise na ise bụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na steeti ahụ enwetela enyemaka n'ụzọ dị iche iche site n'aka Oriakụ Ebelechukwu Obianọ, ọbụnadị dịka ọ rịọrọ ha ka ha jisie ike n'ọrụ.
Mmemme ahụ, nke isiokwu ya pụtàrà, ma a tụgharịa ya "Ọrụ Dịịrị Ndị Ndu Ụmụnwaanyị Obodo n'Ịkwàlìte Mmepe Bụ Ịgbà" dọtàrà ọtụtụ ndị dị iche iche e ji okwu ha agba ìzù na steeti ahụ, nke gụnyere Ọka okwu ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti ahụ, bụ Maazị Uchenna Okafor; onyeisioche òtù 'Anambra State Association of Town Union' (ASATU) bụ Maazị Alex Ọnụkwue; onyeisi oche otu ndọrọ-ndọrọ APGA na steeti ahụ, bụ Maazị Norbert Obi; onyeisioche Ọhaneze Ndị Igbo na steeti ahụ, bụ Maazị Damian Okeke-Ogebe, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ.
A nọkwàzịrị na ya bụ mmemme wee guzobe ndị ahụ a họpụtàrà ọhụụ dịka ndị ndu ASATU, ngalaba ya nke ụmụnwaanyị.